Forum serasera malagasy Vady mizara vady ...? Vady hendry nampirafy... - Dinika forum.serasera.org
Vady mizara vady ...? Vady hendry nampirafy...
Fitohizan'ny hafatra : Vady mizara vady ...? Vady hendry nampirafy...
Felantsoa14 - 28/06/2017 07:10
Iqlqnq tsiny ;ialoha fa lava be ity tantara ity
Mba te-hanontany ny hevitrareo vehivavy efa sendra tantara mitovitovy @ ity tantara ity aho.
Manambady efa 12 taona ary efa niteraka 2 izahay. Anisany hendry @ vehivavy ihany angamba aho satria na dia nanana flirts maromaro fony adolescente aza dia 24 taona vao niditra t@ sehatra firaisana ara-nofo ary ny lehilahy nisantatra ahy ihany no lasa vadiko, izaho moa anisany tena mpanenjika ny olona mampirafy satria nizy olona akaiky ahy nampirafesin'ny vadiny ka izaho mihitsy indray no niady talohan'ilay tena tompom-bady. Niaraka 6 mois izahay no nanomboka niditra t@ io ary 5 taona taty aoriana vao niroso t@ fanambadiana. Hatreo tsy dia nisy olana teo @ couple-nay. Niteraka ny zanakay voalohany, niteraka ny faharoa. Ny complicité tena tao tsara. Asa na noho io complicité io fa nanomboka tsy nisy niafina intsony ny resakay, tsy toy ny t@ voalohany mbola misy jardin secret kely ihany. Indray andro, tsy tadidiko ny resaka fa niteny tamiko ny vadiko hoe :
Raha sendra fakam-panahy enao ka tafaroboka @ fampirafesana dia ireto fotsiny no angatahiko :
- Aza mandrava tokantrano (na ny antsika na ny an'izay olona tafiaraka aminao)
- Aza mitondra aretina miditra ato an-trano
Nametrahako fanontaniana izy hoe avelanao hanao sipa angaha aho ? Tsy novaliany ilay fanontaniako fa noteneniny hoe tsy izany no tiako ambara fa raiso @ izay fandraisanao azy fotsiny io.
Ny asako moa mifandray @ client ary fantany tsara izany, ary fantany koa fa tena misy clients tonga ao am-piasana fotsiny hikôty sy hananihany.
Nisy fotoana ary nisy lehilahy ni-inviter ahy hiara-hisakafo atoandro aminy tsy lavitra ny fiasanay. Izahay moa manao heure continue ka pause 1h ihany hisakafoanana. Nolaviko io fanasana io fa nodiako fanina ranamana ary nolazaiko hoe efa manana sakafo aho hohaniko ato am-piasana, sady tsy @ gout-ko moa ilay olona moa izaho tsy nieritreritra hanao sipa izany. Nony ampitso tsy tonga tao am-piasana izy fa niandry tsara t@ fiara t@ 12:30, ora fivoahako hisakafo eo akaikin'ny fiasana ihany. Nandefasany code-phare aho dia nantsoiny sady noteneniny hoem raha handeha hisakafo ihany tsy aleo ve miaraka eh ? Tsy hitako izay natao ka nanaiky tsy sazoka aho. DIa niara-nisakafo izahay. NAteriny niverina aho t@ 13h30 dia vita hatreo iny. NOtantaraiko ny vadiko io tantara io @ maha tsy manafinafina anay. Tsy sarotiny izy satria efa nisy hatrany ny fifampatokisana.
Nony ampitso iny nisy lehilahy iray hafa izay efa nikôty sady nibaboka tamiko mihitsy hoe tena tara be amiko ary mpandefa sms mambabo be isaky ny avy mandalo ao am-mpiasana, tonga tao ary avy dia ni-inviter ahy koa hiara-misakafo atoandro. Lasa ny saiko hoe inona ary no nahatonga ahy ho nanintona lehilahy toy izao. Dia nekeko par politesse koa io ranamana io saingy tsy iny andro iny fa andro hafa. Nanomboka teo nieritreritra tsy hampahafantatra ny vadiko ilay invitation faharoa io satria sao hampiahiahy azy.
Tany @ fisakafoanana dia ni-inviter ahy hiara-hivoaka alina aminy @ andro zoma ranamana. Tsy nety tamiko io ary noteneniko azy hoe tsy possible izany satria izaho manambady ary tsy hanaiky an'izany ny vadiko. Teo nefa dia nisy naman'ny vadiko nahatazana anay tao @ ilay resto, tsy maintsy hotantaraina azy ihany sao ilay namany no hitantara voalohany any.
Taty aoriana mbola nanasa ahy hiara-misakafo indray izy dia tsy afaka nandà intsony. Nony tonga tao anaty fiara anefa gaga aho fa efa nisy sakafo tao (Hamburger, Coca, ...) dia novelominy ny fiara dia niainga izahay ary nanontaniako izy hoe ho aiza isika. Tsy taitra izy namaly aho hoe te-hitokana miaraka aminao irery aho fa tsy any anaty resto nefa tsy ato anaty fiara koa satria mafana be ato, Afaka entiko any @ hotel ve enao de any tsika milamina kokoa ?
Tsy hitako izay ambara satria na izaho koa aza efa elaela rehefa tsy mahita azy ao am-piasana sy tsy maharay ilay SMS mambabo be dia otrany hafahafa, nokapohiko fotsiny ny tanany sady noteneniko hoe enao maditra fa tsy tiako.
Saika naveriny tao am-piasana za nefa za ndray no niteny hoe zao ve de hiverina any sahady nefa ny sakafo aza tsy mbola lany ? Dia nentiny t@ hotel iray tsy lavitra loatra ny fiasako fa 20min eo ho eo dia tonga any na misy embouteillage aza.
Mazava ho azy fa dia nanao fotsiny no nataonay tao nanomboka 13h hatr@ 15h. Ny sefoko mbola antsoiko nilazako ny fahatarako satria mbola "mitsidika client" (Tena client tokoa)
Nanomboka teo farafahakeliny 1 fois par semaine, indraindray 2 na 3 fois (surtout rehefa tsy eo ny vadiny) dia alainy ao am-piasana foana aho na atoandro entre midi et 14 na hariva apres 17h dia direction chambre d'hotel.
Ny vadiko moa efa zatra mahita ahy mody taraiky ary aterin'ny sefonay (vehivavy) mody satria matetika misy fivoriana tokoa tao am-piasana, dia tsy dia taitra nahita ahy mody harivariva vers 19h30 any ho any.
Naharitra 5 volana teo io fiarahako sy io lehilahy io ary rehefa misy fotoana mandeha faritany izy dia tsy mitsahatra ny miantso kely, dia izaho indray no malahelo.
nisy fotoana faramparany niarahanay no hitako tena nampalahelo ahy satria niantso ny vadiny dia noteneniny hoe "Mbola mivory ato am-piasana fa avy dia misakafoana dia matoria fa mety ho alina be vao tafody" avy eo le vadiny manao bisous sy je t'aime ao @ téléphone nefa izy @ io miboridana miaraka amiko. Teo aho tena nalahelo sady nieritreritra hoe raha ny vadiko no ôtran'izao angamba tsy ho zakako fa na miady na za marary fo. Afaka andro votsy talohan'io dia nifindra asa ny vadiko ary iray immeuble aminay ny toeram-piasany. Sahirana ny foko satria tsy hotafaraka @ ilay sipako nefa faly koa satria efa fantatro hatry ny ela fa tsy hotohizana mandramaty ilay fiarahana fa tsy maintsy hajanona indray andro any. Nanomboka teo no noteneiko izy hoe aleo hilamina @ zay fa ramose miasa ao ambony ao ka tsy hay raha tazany ny fivoahantsika eto.
3 volana torianan'ny nijanonako t@ ilay fiarahana dia niverina indray ilay resakay mivady @ ilay hoe raha misy fakam-panahy. Nanontaniako azy tsara ny antony dia nohazavainy tsara : Mety misy ny fakam-panahy, mety misy ny olona mba nampi-fantasmer anao ka raha sendra tafaraka irery ianareo ve dia havelanao eo fotsiny izy ? Miaraka mission na tafaraka bloqués irery anaty ascenseur pendant 3 heures En plus raha tsy diso aho dia izaho irery ihany no lehilahy nanaovanao RS hatr@ izay, dia mba mahita experience kely hafa ianao.
TSy hitako izay notenenina fa hany heriko nanontany azy hoe "Tianao hofantarina ?" Efa nisy ilay olona ary vao haingana izahay no nisaraka, juste t@ ianao nifindra asa iny. Dia notantaraiko brievement ny fiarahanay ary gaga be aho fa tsy tezitra izy nefa boramena be ary excité be tsy nisy otran'izany. Asabotsy apres-midi io andro io ka nalefanay tany @ cousine-ny ny zanakay ary dia nanao RS be tao izahay mivady, ilay mpanampy aza angamba gaga fa nihidy trano tao foana izahay 2 ary nefa izaho tena nikiakiaka be nihitsy pendant an'izay.
Ny alina manontolo mbola nitohy ilay izy ary tena hitako hoe tena nanovokovoka mihitsy ilay vadiko.
Nanontaniako azy ny effet nahenony ilay tantarako dia hoy izy hoe "tena excitant be, mampte hanao be, mbola tiako kokoa raha hitako mihitsy enao sy le oul manao eo am-pandriana fa rien que d'y penser je bande toujours; Maninona raha antsoina izany de tsika 3 no miaraka ? sns...
NOteneniko azy fa tsy sahiko ny hiaraka manao @ olona iray nefa misy 3 eme personne eo, mbola nampiany hoe ary maninona raha mitady couple tsika dia any no mifamadika raha mety na koa samy manao fa mifampitazana ? Dia tsy mbola nanaiky ihany aho.
Izao aho lasa saina hoe izaho ve dia nahavita an'izany ? Ny fitaizan'ny reniko ahy, ny tontolo niainako (Sekoly, fiangonana, etc...) tsy nisy na iray aza mety nampahatonga an'izany. Ny tsapako effet declencher dia ilay attention azoko sy ilay teny mamy nambabo avy tany @ ilay bandy.
Finalement izany mora babo ihany aho rehefa sendra ny mahay azy, saingy ity vadiko dia nahagaga ahy fa tsy tezitra mihitsy ary na nisy aza ny ady teo aminay mikasika ny relation-nay tsy nampiditra ioresaka io mihitsy izy
Asa isay efa niaina an'io naroe eto dia mba zarao ary koa mila commentaire mikasika an'io aho
Ialana tsiny fa lava be ilay tantara
rhaj0 - 04/07/2017 15:27
izaho moa lhl.. ka dia tsy hiteny izany ee... tsy aritro fotsiny hoe, tsy ratsy ilay roman.. ary tena be mpanaraka an..
Felantsoa14 - 05/07/2017 04:38
Ilay izy ry rhaj0 dia tantara niainana ka raha vao nijery todika nieritreritra azy dia nitamberina daholo ilay niainana ah. Izaho koa moa somary sentimentale izay dia toy ny roman ka dia voasoratro toy ny niainako azy ny izarako azy aminareo.
Na izany aza afaka mitantara izay mba mety niainanao koa ianao na lehilahy aza, na olona fantatrao niaina tantara otran'io
cupidon.tina - 12/07/2017 06:54
Efa nahalala tantara toa ny anao io aho. Ary toa betsaka ny toy io an !
Fa ny fanontaniako dia izao : rehefa avy niaraka ianao sy ilay lehilahy ka tonga any an-trano ny hariva, dia mety mitady koa i Monsieur. Tsy vizana ve ndry ? Ahoana raha mandà isika vehivavy amin'izay ? Sa manaiky ihany fa mety hoe vao maika lasa excitant satria lehilahy roa be izao no miaraka eritreretina ?
ravonjison - 12/07/2017 12:01
..tena roman mampilendalenda tokoa izy izany, na ny maminavina ny antsipirihin´ny nataonareo roa tany amin´ny hotely fotsiny aza....Fanamarihana no ho ataoko eto :
1- ny vehivavy rehefa mihalehibe ny zazany ka mihamaivana izy eo amin´ny adidy sy fanenjehana fotoana, dia manjary misy fotoana, ka manomboka mieritreritra ny mandinika ny fiainana. Manao famintinana kely izany. Eo no ahitany fa misy tokony hahitsy , na ampiana , na andramana, na hatsaraina eo amin´ny fiainany ( anisan´izany ny experience sexuelle !!!). Izany hoe : mila fanairana izy eo, mila zava-baovao, mila hetsika, mila plan vaovao...sns. Ka raha misy olona mahatsikaritra io fotoana io aminy ka mi-proposer ireo zavatra voalazako ireo ( na vadinao io na olon-kafa), dia hifandray avy hatrany ny tandin-dokanga...Ny lehilahy mitady vehivavy amin´io fotoana io dia vehivavy tsy be olana no kendreny : efa lehibebe ny zaza, miasa tsara, manana tokantrano milamina ( amin´izay tsy misaraka satria tsy izay no tanjona), mba misy toerana eo amin´ny fiarahamonina sn...Izay angamba ilay tranganao, ary izany no mahatonga anao manintonan-dry zalahy.
2- ny vadinao angamba toa mahalala izany tsara, na koa manana ny experience personnel mikasika an´io, hany ka tsy mahataitra azy izany ( mety efa niaraka tamin´ny sipa na vadin´olon-kafa tany angamaby izy izany ????)
3- otran´ny tsy voaresaka tao hoe nampiasa fimailo ianareo. Mba jereo ihany iny fa mahafinaritra rehefa tsy misy akony iiay izy any aoriana.
Felantsoa14 - 13/07/2017 22:40
Tena efa nitranga matetika io resakao io. Tsy afaka nandà fa dia comblée tsara tao anatin'ny alina. Ny nampalahelo ahy kely dia ny vadiko tia mikitika ao ambany @ lela (Azonao angamba ny tiako hambara) kanefa tsy nahatsikaritra ny fofona mety tao ka dia nanao rakotomandimby tao eh, izaho koa moa misasa tsara mialoha ny hivoahako ny chambre, moa rehefa ny hariva izaho sy ny sipako no miaraka dia afaka mandà an-dramose aho satria avy "nivory" dia vizaka satria alinalina "toy ny mahazatra" vao tafody. Izy koa tsy dia maka lagy @ izany fandavana izany rehefa hitany fa tena vizana aho
Felantsoa14 - 13/07/2017 22:47
Valiako tsirairay ny fanontanianao :
1 - Tena izay tokoa angamba ny ahy satria nanana fandrosoana tsara teo @ asa, tsy dia nanana charge be tao an-trano, ny mpanampinay koa moa dia tena namana nahatoky raha fikarakarana ny zaza no resahana, etc.... ka izay ilay teninao, tena mitombina tamiko
2 - Possible efa niaraka t@ olona koa ny vadiko satria nanontaniako asy ny antony tsy nahatezitra azy dia noteneniny hoe possible ny tranga sady toa vao mainka ni-exciter azy ilay izy. Nanontaniako azy hoe izy koa angaha te-hanao sipa dia novaliany hoe tsy te-hanao sipa fa te-hanao @ olona hafa koa na miaraka izahay mivady na izy irery any @ olona hafa any. Noteneniko asy hoe tsy tiako izany miaraka izany izahay fa aleo resaka discret. Noteneniko azy fa tsy zakako izany izy miaraka @ olona hafa izany nefa ato an-tsaiko mino aho fa efa niaraka t@ olona hafa izy ary possible vhv manambady koa saingy tsy hivaky amiko mihitsy an'izany izy satria fantany fa tsy ho zakako izany
3- Azonao an-tsaina @ io valiteniko iray eo ambony io angamba ny valin'ny fanontanianao. Tsy nisy fiarovana fa dia roboka t@ izao. Izaho manao fanabeazana aizana mampilamina be ka tsy nieritreritra ny aretina akory. Nisy fotoana taty aoriana efa ela be nila nanao test VIH izahay mivady satria hiondrana hivoaka an'i Madagasikara izay aho vao natahotra. Soa fa negatif ilay test 3 ans apres le dernier rapport niaraka t@ ilay sipako
Felantsoa14 - 14/07/2017 03:26
Mba tiako hitantara ny niainany ny tantara toy izao ireo vehivavy namako eto.
Mba tantarao hoe Cupiond.tiana izany tantara fantatr'ndry izany
ravonjison - 14/07/2017 12:02
Izaho lehilahy, tsy manana ho tantaraina aho mikasika an´io, fa ity avy amin´ny mpitantara , nalaiko avy atsy amin´ny moov, ka zaraiko eto.
Ny nahagaga anefa dia izao indray no tafiditra t@ resaka fampirafesana. Sendra lehilahy nahay nambabo, mbola zandriko aman-taonany izy saingy tsy haiko fa Na inona na inona nangatahany hatao miaraka amiko dia nanaiky aho : nanomnoka tamin´ny fanomezana azy ny laharana finday, Niafara t@ fiarahana tany @ hotel. Naharitra 5 volana teo izany ary tsy nitsahatra raha tsy niray bâtiment ny orinasa nisy ahy sy ny vadiko na dia samy hafa aza ilay orinasa.
Tantara nandalo tsy adino...."
cupidon.tina - 14/07/2017 15:18
Rahavavy ato an-trano ihany. Be mpitsiriritra i D..., satria sady tsara tarehy no manana anton'asa tsara.
Nifamaly izy mivady ary tsy nifampiteny andro vitsivitsy. Efa nisy lehilahy nikaoty an'i D..., ary nekeny taorian'io ady io. Direction hôtel tao aorian'ny firavany amin'ny 16h. Adiny efatra sy sasany no nanao fotsiny. Nanomboka tamin'ny 16h30 hatramin'ny 9 alina. Nahatonga in-dimy ilay lehilahy sipany vao vita ny natao. Izaho, hoy i D..., dia toa tsy nanao afa-tsy nikiakiaka angamba nandritra izay fotoana izay. Mety afa-baraka tao amin'ny hotely raha nisy nahare.
Fa ny olana dia taitra tanteraka ny vadiny satria tsy fombany ny mirava alina be ohatra izao hatramin'izay. Niantso anay mpiray tampo izy. Nanontany ny ray aman-dreny, satria ny ankizy tena mbola kely. Mety nivory izy, hoy aho, fa tonga eo ihany. Tsy nilaza angaha izy e ? Hoy aho nanatsafa. Niady izahay, hoy izy, dia izay angamba no tsy nitenenany. Izaho mahafantatra, fa tsy afa-miteny.
Nony tonga tany an-trano i D..., dia niresaka ry zareo ary niombona. Mbola nanao ny alin'iny. Hatramin'ny 1 maraina, hoy i D...
Hoy fotsiny aho mantsy azy : ajanony ilay fiarahana amin'ilay lehilahy sao ahitan-doza. Fa mbola notohizany hatramin'izao. Efa ho 9 volana izao.
Felantsoa14 - 15/07/2017 02:39
Tsy afenina fa sarotra ihany ilay niala t@ ilay tantara an !!! Ny fo mitady ho latsaka tanteraka fa ny saina no niezaka nandresy. Tranga hafa izay mety hisy risque hahitan'ny vadiko sy io lehilahy io miaraka no nanamafy ny saiko hisaraka raha tsy izany dia mety efa izahay mivady no nisaraka.
Tantara hafa iray koa ity : Naman'ny vadiko ilay mpivady (V ilay sipa sy R, ilay vadiny). Mbola mpianatra secondaire izy ireo no nifankahalala ary nisy lehilahy anankiray (N) hafa no sipan'ilay sipa t@ izany mbola mpianatra izany. Nony taty aoriana anefa dia nivady i V sy R no nifanena t@ vadiko dia hoy ny vadiko hoe tena beau couple ireto.
Taona vitsy taty aoriana anefa i R niaraka t@ sipa tao anaty fianakavian'ny vadiko ary efa bevohoka ilay sipa, TSy sahy naontany an'i R ny vadiko fa olona hafa no nanontaniana dia hoe efa nisaraka ange i R sy N eh. Tsy nanisy resaka an'iny intsony ilay vadiko. Taty aoriana anefa nifanena t@ namana mpiray kilasy t@ zareo ilay vadiko dia nahazo version hafa an'ilay fisarahana. Hay i R nisy fotoana niasa tany France ary i V niverina niaraka t@ i N (izay efa manabady koa) tao anatin'izay fotoana tsy nahateo an'i R izay; bevohoka mihitsy i V ary notazoniny ilay zaza.
Izay no antony nisarahan'ireo. Ny tena nampiaiky ny mpiara-mianatra t@ izany dia i V izay sipa tsotra, ireny bossiste be ireny, tsy mba azo nadalaina mihitsy t@ zany t@ izy mbola nisipa t@ N. Sipa loyale be fa nahavita nanitsaka vady ary bevohokan'ny sipany mihitsy.
Asa re fa dia izay ilay fiainana.
Felantsoa14 - 20/07/2017 19:39
saika nitovy t@ ahy io tantara resahanao io. Mino aho fa ho maro ny lehilahy tsy hatoky ny vadiny intsony raha miha-maro izao tantara izao
sipagasy - 22/07/2017 18:03
akory atao, olombelona mandia tany daholo isika ....... tsy tohizako ny tohiny,
tsy fahadisoana izany aloha amiko e!!!! nahoana moa no ho voatery ho tokam-po (hihih) raha miaro-tena @ aretina izy dia miaro ny vadiny any an-trano ihany koa izany ....... aza mitora-bato ahy eo ann
Ravonjison - 22/07/2017 20:01
Tsy hifampitorabato no atao eto ka, mizara ny zavamisy mba hampitomboana fahalalána.
Andry Njila - 26/07/2017 09:20
Io Fitiavana io ihany no mahatonga izany ????
Hoy ilay namantsika malaza.be ato am.sersera resaka sipa hoe efa nampianarina azy hoe ny Fitiavana no lehibe indrindra dia tsy misalasala izy mifankatia be amin'ny maro. ????
mirananirina - 16/09/2017 18:05
Mahaliana tokoa ilay tantara fa ny mahagaga ahy dia sambany aho naheno lehilahy tsy saropiaro ary tsy naninona fa vao maika niaraka be ianareo.
Mbola tiany aza ny ahita anareo 2 manao eo imasony? Dia gaga aho marina? Mbola tia ve izany ?
Na izany na tsy izany aza matoa ny olona 1 mampirafy dia tsy tiany intsony ilay 1 mazava ho azy,
calin.brandon - 21/09/2017 10:51
Diso kosa izany e ! Tsy midika foana ho tsy fitiavana intsony ny fampirafesana. Maro ny antony ary mety tena fitiavana be io antony io;
yakunah - 01/10/2017 09:19
Sarotra iany no ieritreritra an izany fa anefa vomay nampifankatia anareo roa fa mety ilay mieritreritra anao niaraka an lehilahy hafa mitsy angamb mampitombo ny fitiavany sy filany anao o ! Fa tsy zakan bandy zany anefa
Ryhaj - 08/10/2017 19:37
Possible mintsy io. Tam za nanana sipa dia nisy tranga otran'io fa ny antony dia voakitika lay égo-ko dia te hanaporofo ah hoe za mbola teo alohany dia na naprafy anah ary izy dia tiako ho averina aminah dia vao may nanao be zahay.
Zay ny fanazavana.
Fa amzao efa tsy zany intsony.
mirananirina - 08/10/2017 21:02
Ho anay vehivavy aloha dia tsy afaka mitia olondroa. Miala @ 1 vao miditra @ 1! Matoa mampirafy izay dia tsy tiana intsony ilay iarahana! Inona aza antony hampirafesana? Hirevy ?